Izindaba - Kulindeleke ukuthi imakethe yezembozo zezihlalo zangasese ichume. Izinkampani ezidumile - Imikhiqizo yephepha leFengcheng Zhonghe
Imakethe yezembozo zezihlalo zangasese kulindeleke ukuthi ichume. Izinkampani ezidumile - Imikhiqizo yephepha leFengcheng Zhonghe
Inani lemakethe esembozweni yezihlalo zangasese ngo-2020 lalingu-US $ 2 billion. Ngokuya ngokutholwe ngenhla nangokubhekwayo, ithimba lethu linezinga lokukhula lonyaka elihlanganisiwe elingu-6.2% kusuka ku-2021 kuya ku-2027, futhi kulindeleke ukuthi likhule ngokuvuthwa eminyakeni emihlanu kuya kweyisikhombisa ezayo.
Ukuhlukaniswa kwemakethe kusekelwe ohlotsheni lwembozo lwezihlalo zangasese, indawo yokufaka isicelo kanye nendawo esemqoka yendawo. Zonke izinto ezibalulekile zihlolwe ngokucophelela, njengezimo zezemvelo, izimo zezenhlalo nezomnotho nezepolitiki, izinkambiso zamasiko, imithetho yamanani entela yamazwe omhlaba kanye nama-ejensi kahulumeni anquma izitayela zemakethe. Ikhava yesihlalo yangasese yehlukile futhi iphelele ngoba ihlanganisa zonke izici zezimakethe ezahlukahlukene ukuhlinzeka izibikezelo ezicacile zokusiza abatshalizimali ukuthi benze izinqumo ezinolwazi ngamathuba okutshala imali.
Ihlukaniswe yizinhlobo zamakhava ezihlalo zangasese nezindawo zokufaka izicelo, izifunda eziyinhloko zemakethe zehlukaniswe zaba eNyakatho Melika, eYurophu, e-Asia Pacific naseRest of the World (RoW). Lezi zifunda ziphinde zahlukaniswa zaba: • INyakatho Melika (i-US, iCanada neMexico) • iYurophu (i-UK, iFrance, iJalimane, iSpain, iRussia kanye nayo yonke iYurophu) • I-Asia Pacific (China, India, South Korea, Taiwan, Singapore kanye neSingapore kanye I-Asia Pacific Others) Isifunda) • Umhlaba wonke (INingizimu neMelika Ephakathi, iMpumalanga Ephakathi ne-Afrika)
Izinzuzo zokuthenga ikhava yesihlalo yangasese ephelele • Usayizi wemakethe nesibikezelo: 2020 kuya ku-2027 • I-CAGR: 2020 kuya ku-2027, ngonyaka we-2020 njengonyaka oyisisekelo imakethe • Sebenzisa ukwethulwa okuningiliziwe kwezindlela zokucwaninga i-data triangulation ngaphandle kwezindlela zokucwaninga zokuqala nezesibili ukuhlola ngokucophelela ukuthambekela kwemakethe
• Ukwenza imephu kumakhasimende kugridi ye-3P enenhloso, ukuhlela nokubeka endaweni ukuhlinzeka ngezixazululo ngokugcina amakhasimende angahle abe sesimweni esihle kakhulu • Ucwaningo lweMakethe ephepheni lezihlalo zangasese zifaka zonke izinto ezibalulekile zemakethe, njengokukhula kokuthengisa, intengo yemikhiqizo ukuhlaziywa, amathuba okukhula, nezincomo zokubhekana nezinselelo zemakethe • Lo mbiko uhlanganisa okunye ukuhlangana okukhulu, ukusebenzisana kanye nokubambisana okuletha izinselelo kubahlanganyeli bezimakethe noma kwezinye izimo • Lo mbiko wocwaningo unikeza izindaba zomkhiqizo zakamuva, izitayela, Kanye nentuthuko yakamuva ezinkampanini ezihola phambili embonini zisebenzisa isikhundla sazo semakethe. • Ibuye ihlinzeke ngamasu namazinga wokunika amandla abadlali ababalulekile ukwamukela izinqumo ezihlakaniphile zebhizinisi ukukhuthaza isu lakho lemakethe. • Ngaphezu kwalokho, ihlinzeka ngokuqonda kokuguquguquka kokuziphatha kwamakhasimende, okungasiza izinhlangano ukuthi zithuthukise kangcono amasu emakethe
• Ukwenza imephu nokuhlaziya imakethe ngombono wama-degree angama-360 ukuhlaziya zonke izinto ezingathinta imakethe • Ukuhlola okufanelekile ohlangothini lokuphakelwa kanye nokufunwa ukuze kutholakale iziphetho • Ukwenza imephu emakethe kusuka ohlangothini lomkhiqizi nolomthengi • Indlela yokuncanywa kwedatha Ukuze thola izinombolo zemakethe ezinembile, besilokhu silandelela • Ukumboza abashayeli, izingqinamba namathuba • Kuze kufike emazingeni amathathu kuya kwamane okuhlukaniswa kwemakethe kulo mbiko • Imininingwane ngayinye ishiwo kuhlelo lokusebenza kanye nasendaweni yendawo Izimakethe ezinamandla nezindawo ezihamba phambili ngemakethe • Ukuhlaziywa kwezinga lezwe kufakiwe esahlukweni esithi “By Geographic Region” • Kuhlinzekwa isithombe sokubuyekezwa kwemakethe esheshayo • Kusetshenziswa izindlela ezahlukahlukene zocwaningo ukuhlaziya imakethe
Isikhathi Iposi: Feb-17-2021